Burmese taste - Iora: အုိုင်အိုရာရဲ့ ငါးအသုံးချပုံများနဲ့ ထွေလီကာလီများ
Posted by Iora at 10:47 AM
မီးမီးငယ် August 25, 2013 at 12:24 PM
ဘေးအိမ်တွေနှာခေါင်းတရှုံ့ ရှုံ့ နဲ့ ၊
spinach,arugula တို့ ကိုလည်း၊
မနေ့ က ဂျပန်ကလာတဲ့ Natto တွေ့ လို့ ၊
(ပဲပုပ်ချက်လေးကောက်ညင်းပေါင်းနဲ့ တို့ စားချင်ထှာနော် :P )
Iora August 25, 2013 at 1:10 PM
ဆန်ပြုတ်တောင်တရုတ်ကလုပ်တဲ့ဆန်အတုမမိဘို့ သတိထားရအုန်းမယ်။း(
စားစရာတွေငရုတ်သီး ဆနွင်းလိုအခြေခံကစလို့ ကြက်သား တုို့ မျှစ် တုို့ ဆေးဆုိုး ဘယ်လိုရှောင်နုိုင်ပါ့မလဲ။ တဈေးလုံးဒါပဲရောင်းကြတာကို။ ကုိုယ်အစကငါးပိရည်တုို့ အော်ဂဲနစ်လို့ ထင်တာ။ သူ့ ပါမဟုတ်တာတွေလုပ်ထားတာကြားရတော့လန့် လိုက်တာ။
ငါးပိအစားပဲပုတ်ပဲစားတော့မှနဲ့ တူတယ်။ ..း)
ကုိုယ်အဲဒီဂျပန်ပဲပုတ်ကုိုကြိုက်တယ်။ အရမ်းစိမ့်တာဘဲ။ ထောင်းစားလည်းကောင်းတယ်သိလား။
ကုိုယ်လည်းခါးသက်သက်အရသာတွေကြိုက်တယ်။ မီးမီးနဲ့ အကြိုက်တူတယ်။
Shwenyar tharlay August 25, 2013 at 9:22 PM
Iora August 26, 2013 at 8:30 PM
ကျေးဇူးတောင်တင်ရအုန်းမှာ အဲလိုကွန်မန့် လေးရေးခဲ့လို့ ။း) ဘာလို့ စိတ်ဆုိုးရမှာလဲ။
အခြေခံလူတန်းစားကတော့ပုိုခံရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ခုပုံအတုိုင်းဆုို တမျိုးသားလုံးခံနေရတာ။ ဈေးတုိုင်းလိုလိုဆေးဆုိုးနေကြတယ်လေ။
အညာမှာကောလုပ်ကြသလားတော့မသိဘူး။ ရန်ကုန်ကတော့အတော်ဆုိုးတယ်။ ငပိလည်းဆုိုးမှာဘဲ။
ကုိုယ်တုို့ ဆုိုပညာတတ်တယ်ဘဲထားပါတော့။ ကုိုယ်တုို့ နေ့ တုိုင်းစားတဲ့ အရောင်တင်မှုန့် တုို့ ၊ ဆနွင်းတုို့ ဆုိုးထားတာတွေပဲဝယ်စားခဲ့ရတာဘဲ။
တခါတုန်းက ရုံးကလုပ်ဖေါ်ကုိုင်ဖက်တစ်ယောက်က သူ့ အသိငရုတ်သီးမှုန့် ထုတ်တဲ့ခလေးမလေးကပြောပြတာတဲ့။ ငရုတ်သီးဖလံဖြူတွေကို ဆေးဆုိုးပြီး စပ်အောင်လို့ ယမ်းမှုန့် နဲ့ လူးတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့်ငရုတ်သီးတွေလည်းနောက်ပုိုင်းဖလံဖြူတွေသိပ်မတွေ့ ရတော့ပဲ ရဲနေကြတာကိုးလို့ တွေးမိတယ်။
လူတုိုင်းကဆုိုးဆေးကိုရှောင်ဘုို့ ကြိုးစားသင့်သလို အစုိုးရကထိထိရောက်ရောက်ကုိုင်တွယ်ဖုို့ လိုပါတယ်။ ကုိုယ်တတ်နုိုင်တာကတော့ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ ကုိုယ့်အသုိုင်းအ၀ိုင်းကိုမကြာခဏသတိပေးဖုို့ ပါဘဲ။
ကျေးဇူးဘဲရွှေညာသားလေးရေ။ ငံပြာရည်ကြိုက်တဲ့ဒုို့ တောင် ကြွက်သေကောင်အကြောင်းဖတ်ရတော့တကယ်တွန့် သွားတယ်။
မိုးငွေ့........ August 25, 2013 at 11:08 PM
ငါးကိုသိပ်မကြိုက်တော့ မစားဖြစ်ဘူး ခုနောက်ပိုင်းတော့ ငါးတော်တော်လေးစားလာတယ် ချက်နည်းလေးတွေကိုယူသွားပါတယ် မုန့်ဟင်းခါးရေလေးချက်ထားတာ သောက်ချင်စရာလေး...ဗူးသီးကြော်နဲ့မုန့်ဟင်းခါးစားတတ်တာလေးတူတယ်...။
Iora August 26, 2013 at 8:38 PM
ကုိုယ်ကတော့ဟင်းတွေဆုိုထပ်ရင်မစားချင်တော့ငါးဝက်ကြက်လှဲ့ စားဖြစ်တယ်။ အမဲသားမစားဘူးလေ။
မုန့် ဟင်းခါးဟင်းရည်နဲ့ ဘူးသီးကြော်စားရတာသဘောကျတယ်။း)
စူးနှယျလေး August 26, 2013 at 12:33 AM
ငါးဟင်းတွေ ရှယ်ပဲ.. ဒီကလည်း ငါးဆို သ်ိကြိုက်၊ အိုးကပ်ပုံစံလေးဆို အရမ်းကြိုက်ပေါ့။ ငါးနဲ့မုန်လာဥချဉ်ရည်လည်း လိုက်ဖက်တယ်နော်။
အာပြဲခြောက်လည်း ခုကောင်းကောင်းစားဖြစ်သွားပြီ။ ငတ်လို့ လေ... လို့ ရေးထားတာသဘောကျတယ်။ တို့က အာပြဲခြောက် လုံးဝမကြိုက်ဘူး။။ အခုဆိုရင်တော့ အိုင်အိုရာ ရေးသလိုပဲပြောရမလားမသိဘူး။ ဝယ်တော့မစားသေးပေမယ့် သူများလာပေးရင်တော့ စားဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
အသင့်လုပ်အစားအစာတွေက အန္တရာယ်များတဲ့အပြင် ညစ်လည်းညစ်ပတ်တယ်။ အသင့်လုပ်မုန့်ဟင်းခါးထုပ်ထဲမှာ ပိုးဟပ်တကောင်ပါလာပြီးကတည်းက ရွံသွားတာ။
မမအိုင်အိုရာ.. ငါးဟင်းတွေချက်ထားတာ ရှယ်ပဲ ငါးနဲ့ မုန်လာဥချဉ်ရည်လဲ ကြိုက်တယ်.
ခရမ်းချဉ်သီးမထည့်ပဲ ငါးကိုအမချက်သလို ချက်စားဦးမယ်.
ဟင်းတွေကို စုံနေတာပဲ အသုတ်တွေရော မုန့်ဟင်းခါးရည်ရော ဘူးသီးကြော်တောင်ပါလိုက်သေးတယ်.
ချက်နည်းတွေ ယူသွားပါတယ် မမ.
Iora August 26, 2013 at 8:47 PM
ငါးနဲ့ မုန်လာဟင်းတော်တော်စားလို့ ကောင်းတယ်သိလား။
အာပြဲခြောက်စစားဖြစ်တာ သူ့ သူငယ်ချင်းက ကောင်းတယ်ဆုိုလို့ ဆီထမင်းနဲ့ တွဲစားဖုို့ ဝယ်စားကြည့်လိုက်တာ။ အနံ့ ဘယ်လိုသတ်ထားလဲမသိဘူး။ မနံလှဘူး။ ပြီးတော့ခုနောက်ပုိုင်းရယ်ဒီမိတ်ငါးခြောက်တွေက ဆားလည်းပေါ့တယ်။ စက်နဲ့ အခြောက်ခံသလားမသိဘူး။ အရမ်းမွပြီးကြွတ်နေတယ်။ တခါတခါမွလွန်းလို့ ရေတောင်ပြန်ဆွတ်ရတယ်။
ကုိုယ်အသင့်လုပ်မုန့် ဟင်းခါးချက်တုိုင်းစူးနွယ်ရေးခဲ့တာကိုသတိရမိတယ်။ အဲဒါဘာတံဆိပ်လဲဟင်။
ပုန်းရည်ကြီးစားရင်လည်းစူးနွယ်ပြောသလို သဲတွေပါမှာစုိုးလို့ အမှုန့် ဆုိုရေရောပြီးရင်ပန်းကန်အောက်ခြေကိုဇွန်းနဲ့ ပွတ်ကြည့်တယ်။ သဲသံကြားရမလားလို့ လေ။း)
ဖြစ်နုိုင်ရင်တော့ကိုယ့်ဖာသာလုပ်စားတာကအသန့် ဆုံးဘဲနော်။ အမြဲလည်းလုပ်ဖုို့ ကမလွယ်ဘူးလေ။
Iora August 26, 2013 at 8:55 PM
ခရမ်းချဉ်သီးမပါပဲတမျိုးချက်စားကြည့်နော်။ ကောင်းတယ်။ အနှစ်ကခရမ်းချဉ်သီးအရသာမပါဘဲကြက်သွန်အရသာနဲ့ ချိုနေတာ။ ဒါပေမဲ့ခပ်ခြောက်ခြောက်လေးဖြစ်တဲ့ထိထားနော်။ မဟုတ်ရင် ကြက်သွန်ညီးစော်နံတတ်တယ်။ ခြောက်တော့မှ မွှေးတာ။
အားရက်မှာထင်တုိုင်းကြဲထားတာလေ။ ကြားရက်ဆုိုရင်တော့ထမင်းဘူးတောင်မနဲထဲ့ရတယ်။ တခါတခါအရွက်မပါလို့ သခွားသီးနဲ့ ဆလတ်ရွက်ကိုဘဲ အရွက်ပါပြီးရောဆုိုယူသွားရတယ်။း)
စူးနှယျလေး August 27, 2013 at 12:12 AM
မမအိုင်အိုရာရေ... အဲဒါ ကျောက်မြောင်းဒေါ်ကြည်တဲ့... အဲဒီတုန်းက ရယ်ဒီမိတ်မုန့်ဟင်းခါးထုပ်ဆိုတာကို ဘဝမှာ ပထမဆုံး ဝယ်မိတဲ့အချိန်ပေါ့။ ဒီမှာစားရအောင်လို့ဆိုပြီးလေ။ ဘယ်တံဆိပ်တွေ နာမည်ကြီးမှန်းလည်း တကယ်ကိုမသိပါဘူး ဝယ်လာမိတာကတော့ အဲဒီတုန်းက ၂မျိုး.. မြောင်းမြဒေါ်ချိုနဲ့ ကျောက်မြောင်းဒေါ်ကြည်ဆိုတာပဲ။
ကျောက်မြောင်းဒေါ်ကြည် ဆိုတဲ့နာမည်ကို မမေ့အောင်ပို့စ်ပါ ရေးထားလိုက်တယ် အေးရော..ဒါပေမယ့်နော် အားလုံးတူတူပဲနေမှာပါ။ သူတို့တွေ ချက်ပြုတ်ပြီး ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းသလဲ ကိုယ်မှမတွေ့တာနော်။ အဖုံးလုံအောင်မဖုံးတဲ့အခါ ပိုးဟပ်တွေ ကြွက်တွေဖြတ်လျှောက် အခန့်မသင့်ရင် သေသွား..ရှိမှာပဲ။ သူတို့ကလည်း တွေ့ရင်ဆွဲထုတ်မှာပေါ့။ တအိုးလုံးတော့ သည်အတွက်နဲ့ သွန်ပစ်မယ် မထင်ဘူး။ အဲလိုလုပ်ငန်းအတွက် ရှိသင့်တာတွေသတ်မှတ်ပေးပြီး ရှိမရှိ၊ သန့်ရှင်းလားမရှင်းလား လျှပ်တပြက်ဝင်စစ်ဆေးတာမျိုး
အဲဒီမှာမှမရှိဘဲ။ ပုန်းရည်ကြီးကလည်း အထားခံအောင်အခြောက်မှုန့်ဝယ်လာမိတာ..ပြောကြတာကတော့အစိုက ပိုစားကောင်းတယ်တဲ့... သဲတွေ ဖုံတွေလည်းနည်းတယ် ဖြစ်မှာပေါ့လေ :D သဲပါမှန်းသိပြီးတာကိုတောင် အမှတ်မရှိဘဲ တံဆိပ်ပြောင်းပြီး ထပ်ဝယ်လာသေးတာ..တူတူပါပဲ ပစ်လိုက်ရတယ်လေ။ ခုတော့ ဒီလိုသတင်းတွေထွက်လာတော့ အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ကိုယ်မမြင်ရတဲ့အစာမျိုးတွေ မစားတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာပဲ...
Adora etc. August 27, 2013 at 1:18 AM
ဒီညတော့ မမIora ရဲ့ဒီ post ကိုဖွင့်ပြီး ထမင်းစားရမယ်။ ဝလာရင် အမ တာဝန်ယူရမယ်။ ဟီး
Iora August 28, 2013 at 7:16 PM
ဟုတ်ပါတယ်။ စူးနွယ်လေးပြောသလုိုဘဲ စစ်ဆေးမဲ့သူလည်းမရှိစံချိန်စံနှုန်းလည်းမရှိနဲ့ ငတ်လို့ သာအဲဒါမျိုးတွေစားဖြစ်နေတာ။ အိမ်မှာလုပ်စားတာဘဲကောင်းပါတယ်နော်။ ပြောမယ်ဆုိုရင်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ချက်ရောင်းတဲ့မုန့် ဟင်းခါးကျပြန်တော့လည်းပန်းကန်ဆေးတာအရမ်းညစ်ပါတ်တော့စားချင်စရာမရှိပါဘူးလေ။
၀ လာရင်တာဝန်ယူရမယ်ဆုိုတော့...ဆက်ပြီးမ၀အောင်ဘာဟင်းမှမချက်ပဲနေရမယ်ထင်တယ်။း)
လာလည်လို့ ကျေးဇူးပါ။ အမြဲကြိုဆုိုပါတယ်။ အားတဲ့အခါထပ်လာလည်ပါလို့ လည်းဖိတ်ပါတယ်ကွယ်။
Kai September 3, 2013 at 5:24 AM
ကောင်းလိုက်တဲ့ဟင်းတွေ iora ရာ.... အပြန်ပြန်အလှန်လှန်ကြည့်ပြီး သွားရည်တွေ ကျပြီး ဘိုက်ဆာသွားပြီ... :D
Iora September 3, 2013 at 6:20 PM
ဟန်ကြည် September 4, 2013 at 3:43 PM
ညှော်လာခံတယ်ဗျို့...ငါးဟင်းကြီးတော့ ကြိုက်ပေါင်ဗျာ...မဒမ်ကြည့် ဓာတ်စာကြီး...း)
Iora September 4, 2013 at 7:11 PM
ငါးဟင်းကြီးမစားရတဲ့အရပ်ရောက်သွားရင်ငါးဟင်းကြီးမကြိုက်ပေါင်ဗျာလို့ ပြောချင်မှပြောနုိုင်တော့မှာနော့်။
အထူးဧည့်သည်လာတုန်းဘာနဲ့ ဧည့်ခံရပါ့။ ကြိုက်တတ်တာလေးတွေပြောထားအုန်းလေ။း)
ဘလော့ဒေးပုို့ စ်လာချောင်းရင်တော့ဆောရီးဘဲဆရာရေ။ အလုပ်တွေများစိတ်တွေမအားရေးချင်ချွတ်ချင်စိတ်ကုန်ခမ်း။
May Thu September 6, 2013 at 12:26 AM
မမအိုင်အိုရာ မလေးတို့ သားအမိက ငါးဆိုအရမ်းကြိုက်တာ မမရဲ့ ဟင်းတွေကို အများကြီးစားသွားပါတယ်ရှင့်။
Iora September 6, 2013 at 8:23 AM
လာလည်လို့ ကျေးဇူးပါ။ အားတဲ့အခါထပ်လာလည်ဖုို့ ဖိတ်ပါတယ်။
Candy September 11, 2013 at 8:20 AM
ငါးဟင်း မချက်တတ်တာနဲ့ အတော်ပဲ ဖြစ်သွားပြီ။ ဒီနည်းတွေအတိုင်းလုပ်ရမယ် :D :D
San Htun September 11, 2013 at 12:16 PM
ရှက်ဖ်ကို မြင်ဖူးနေပေမယ့် တခါမှ မစားဖြစ်ဘူးး..မမအိုင်အိုရာ ညွှန်းထားနဲ့ချက်စားဦးမယ်...
ငါးချက်ရင် ညှီနံ့ ရလို့ပုဇွန်ပဲ စားဖြစ်နေတာ..အစ်မဟင်းတွေ မြင်မှ ချက်စားဦးမယ်...
တပတ် ၂ ရက်လောက် ထမင်းဗူး ချဉ်ပေါင်ကြော်ယူတယ့် သူလို့စန်းထွန်းကို မှတ်မိနေမလား မသိ...
အဲဒီလောက် ချဉ်ပေါင်ကြိုက်တယ့်သူ အိုင်အိုဝါနဲ့ကန်တက်ကီမှာ ချဉ်ပေါင်ငတ်ခဲ့သမျှ မေရီလန်းရောက်မှ အတိုးချ စားနေတယ်..း)
မြန်မာပြည်က ဆိုးဆေးတွေက လန့် စရာ..အဲဒီအကြောင်း ပညာပေးတာလေး ရေးတာလေး ဖတ်ချင်ပါတယ် ခင်ညာ...
Iora September 12, 2013 at 8:20 PM
ငါးဟင်းကကြက်သွန်ကောင်းကောင်းမကျက်ရင်ပုိုပြီးညှီတယ်လို့ ထင်ရတယ်။ ကြက်သွန်ကောင်းကောင်းကျက်အောင်စိတ်နဲနဲရှည်ဖုို့ လိုတယ်။ အဲဒါပြီးရင်တော့ခဏလေးကျက်ရော။း)
ကေးလ် ကို ( Kale )ပြောတာလားစန်းထွန်းလေး။
တချို့ ငါးတွေကညှီတယ်နော်။ Cat fish လည်း တချို့ တရုပ်ဆုိုင်ကရောင်းတာတွေညှီတယ်။ မညှီတဲ့ငါးကုိုမှတ်ထားပြီးဝယ်စားရတယ်။ ဒီမှာကတော့ Cat fish နဲ့ ပုဇွန်အရမ်းကောင်းလို့ အမြဲချက်ဖြစ်တယ်။
ချဉ်ပေါင်တွေတွေ့ ရင်စန်းထွန်းကိုသတိရနေခဲ့တာ။ အခုစန်းထွန်းချဉ်ပေါင်တွေ့ ရင်မမအိုင်အိုရာ ကိုသတိရနော်။း)
စန်းထွန်းရေ..စာအုပ်တွေအိမ်မှာကျန်ခဲ့လို့ တချို့ စာတွေရေးချင်လျက်နဲ့ မရေးနုိုင်ဖြစ်နေတာ။ မသေချာတာမျိုးကိုမရေးချင်ဘူးကွယ်။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) September 14, 2013 at 9:08 AM
ဟင်းတွေ စုံလွန်းလို့ ထမင်းစားပြီး စာလာဖတ်တဲ့သူတောင် ဗိုက်ပြန်ဆာသွားရတယ်.။ ငါးချက်နည်း အမျိုးစုံပါ့လား... လိုက်မှတ်ထားတယ်။ စမ်းချက်ကြည့်ဖို့လေ..
စာမရေးဖြစ်၊ ဘလောဂ့်လည်းမရောက်ဖြစ် ဖြစ်နေတာ
ဒါပေမဲ့ ဘလောဂ့်အချင်းချင်း ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကိုတော့ အမြဲ သတိရနေပါတယ်။ ဘလောဂ့်ပေါ်မှာ စာတွေတင်ချင်ပေမဲ့ အချိန်သိပ်မရတာနဲ့ စာမရေးနိုင်ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။ စာလေးတစ်ပုဒ်တင်လိုက်ရပြီဆို ဖြစ်ရတဲ့ ပီတိကိုလည်း အမြဲလွမ်းဆွတ်နေတာပါ။
Iora September 15, 2013 at 7:45 AM
ကုိုယ်ချောကိုသတိရရနေတာ။ အစစအရာရာအဆင်ပြေပါစေလို့ ပဲဆုတောင်းနေတယ်။ ဘာကြောင့်ပျောက်နေမှန်းမသိတော့လေ။ နုို့ မို့ ရင်ဘလော့တွေမှာချောရဲ့ နှစ်လိုဖွယ်ပီယ၀ါစာကွန်မန့် လေးတွေချန်နေကြမဟုတ်လား။
ကုိုယ်လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်လောက် မုန်ညင်းချဉ်ချောပြောသလိုလုပ်ဖြစ်တယ်။ ကောင်းတယ်။ မုန်ညင်းချဉ်ပုံတွေတွေ့ တုိုင်းအဲဒါလေးကိုပြန်သတိရတယ်။ ခုမုန်ညင်းပေါတဲ့နေရာရောက်နေလို့ လုပ်ဖုို့ ချိန်နေပြန်ပြီချောနည်းလေးနဲ့ ။
(ချော ကွန်မန့် က စပန်မ် ထဲရောက်နေလို့ ။ တော်သေးတာပေါ့ သိပ်အကြာကြီးမဟုတ်သေးလို့ ။ ဆောရီးနော်။)
လသာည September 15, 2013 at 6:55 AM
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွှတ်တဲ့ အသားငါး ရွေးပုံရွေးနည်းနဲ့ အတူ စားချင်စရာ ဟင်းလျာများအတွက် ကျေးဇူး။ ဗိုက်တောင် ဆာသွားတယ်။ ဓါတုဆေးတွေမပါတဲ့ အသားငါး ဟင်းသီးဟင်းရွက်က မြန်မာပြည်မှာ တကယ်ကို ရှားပါးလာပြီ..။ သတိထား ရွေးနိုင်မှ တော်ကာကျတော့မှာ။ ဗဟုသုတလည်း ရ၊ ဗိုက်လည်းဆာသွား.. ကျေးဇူး ;)
Iora September 15, 2013 at 7:29 AM
လာလည်လို့ ကျေးဇူး။ မှတ်ချက်လေးကြောင့်ပိကျေးဇူး။
Iora September 15, 2013 at 7:31 AM
ဆောရီး....မှတ်ချက်လေးကြောင့်ပိုကျေးဇူး...လို့ ရေးတာပါ။း)
လသာည September 15, 2013 at 8:04 PM
ဟိုးအရင်က မကြာမကြာ ရောက်တယ်။ ဟင်းမချက်တတ်လို့ ဟင်းချက်နည်းလေးတွေ လာလာကြည့်တာ :D
အခုနှစ်တွေထဲ တစ်နှစ်ကျော် နှစ်နှစ်နီးပါး အင်တာနက် ခက်တဲ့နေရာ ရောက်နေခဲ့ရလို့ ဘလော့ဘက် မရောက်တာ..။ အခုတော့ အင်တာနက်လည်း အရင်ထက် ကောင်းပြီဆိုတော့ မကြာမကြာ လာတော့မှာ :D
အားလုို့ ကတော့လာသာလည်။ အမြဲကြိုတယ်နော့်။း)